Morning View Studio - I-Airbnb
Indlu esemaphandleni yonke sinombuki zindwendwe onguPeter & Kia
Yonwabele ukubukela ukuphuma kwelanga ukwibhedi yakho ekhululekileyo yobukhulu bokumkanikazi kwesi situdiyo silula, nangona simnandi. Kubusuku obubandayo kukho ingubo yombane kunye nomlilo weenkuni (iinkuni ezibonelelweyo) kunye nephuli eshushu yelanga ngeentsuku zasehlotyeni. Yenza ukutya ekhitshini elinefriji, iketile, itoaster, isitovu sombane kunye nemicrowave. Kukho iyadi evaliweyo ngaphandle komnyango wakho apho ungakhetha khona imveliso entsha egadini kwaye kukho indawo eyaneleyo ejikeleze ipropathi yeehektare ezili-9 ukonwabela iimbono ezintle kunye nokutshona kwelanga.
Intle kwaye icocekile inendawo eninzi yangaphandle kunye nemibono emangalisayo! Sihlala kwiihektare ezi-9 encotsheni yenduli enembono ye-360 degree, ngoko sihlala sifumana impepho epholileyo ehlotyeni kunye nokuphuma kwelanga okumangalisayo kunye nokutshona kwelanga.
Kukho ibhedi yokumkanikazi epholileyo kunye nekhitshi elilula kodwa elixhotyiswe kakuhle ukwenza ukutya kunye negumbi lokuhlambela elineshawa, isitya sezandla kunye nendlu yangasese. Kukho ifriji, itafile enezitulo ezitofotofo kunye neWiFi yasimahla.
Konwabele ukusela kunye nokuhlamba ngamanzi emvula acocekileyo ngexesha lokuhlala kwakho okwenza ulusu lwakho luzive lumnandi.
Kwistudiyo kukho umlilo weenkuni onika ubushushu obaneleyo kwiinyanga zasebusika. Iinkuni zisikiwe kwaye zibonelelwe wena! Ehlotyeni kusoloko kukho impepho epholileyo ebusuku kumphakamo oyi-1180m ngaphezu komphakamo wolwandle kodwa ungaya kuntywila kwidama lethu elithandekayo lamanzi anetyuwa elanga ukuze uphole!
Sinegadi yemifuno ethandekayo onokuthi kuyo uvune Imifuno emitsha kunye nohlaza ehlotyeni kunye ne-chooks eziza kukunika amaqanda amatsha! Unokukhetha kwakhona amajikijolo amatsha kwi-berry patches ngexesha lonyaka! Efama sikwanazo neebhokhwe ezinobubele kakhulu ezithanda isonka, iialpaca ezi-2 kunye noChippy wethu uJack Russell.
Sifumaneka kwimizuzu eyi-15 ukusuka eArmidale kunye nemizuzu eyi-15 ukusuka eUralla. Kukwakho nevenkile ebekwe kakuhle kumgama oyi-3km enezinto eziqhelekileyo, ipizza kunye nokutya, ikofu kunye nepetroli.
4.89 · Izimvo eziyi-82
Sifumaneka kwimizuzu eyi-15 ukusuka eArmidale kunye nemizuzu engama-20 ukusuka eUralla. Kukwakho nevenkile ebekwe kakuhle kumgama oyi-3km enezinto eziqhelekileyo, ipizza kunye nokutya, ikofu kunye nepetroli.
Umbuki zindwendwe ngu- Peter & Kia
Hello! We live in the beautiful New England region of Australia on a gorgeous 9 acres of open space, spectacular views and clean air. We love our ridge top location as we can see every sunrise and sunset!
We have had some amazing times trotting the globe and meeting wonderful people and we are looking forward to exploring the world with our 2 daughters.
Silapha ecaleni kwethu kwaye sifumaneka ngokulula ukukunceda ngemibuzo okanye naluphi na uncedo olufunayo kwaye siyavuya ukukubekela umthwalo wokuhlamba ukuba uyafuneka.
Istudiyo sibucala njengoko indlu yethu ijonge kwelinye icala ukuze ukhululeke ukubaleka kwaye uhambe ngokuthanda kwakho ngaphandle kwamaxhala okusiphazamisa.
Silapha ecaleni kwethu kwaye sifumaneka ngokulula ukukunceda ngemibuzo okanye naluphi na uncedo olufunayo kwaye siyavuya ukukubekela umthwalo wokuhlamba ukuba uyafuneka…
Inombolo yomthetho: PID-STRA-24754
Hlola ezinye iindawo onokukhetha kuzo e- Invergowrie